कंगना रनवत र एडल्ट फिल्म ! - Nepal Post Daily
कंगना रनवत र एडल्ट फिल्म !
बीरगन्जमा चार संक्रमितको मृत्यु
Nepal Post Daily - September 20, 2020 0
बीरगन्ज, ४ असोज। बीरगन्जमा एकैदिन चार संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पर्साका २ जना, बाराका १ जना र रौतहटका १ जना गरी चार जनाको...
नयाँ बाटो बनेपछि जग्गाको मूल्य आकाशियो, प्रतिकठ्ठा ३० हजार रुपैयाँबाट ३० लाख
वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अलौ र्सिसियास्थित आईसिपी पुग्ने नयाँ बाटो निर्माण भएपछि बाटो वरिपरिको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ह्वातै बढेको छ।आईसिपीसम्म पुग्ने चार लेनको बाटो निर्माण...
“भीडभाड नै गरेर भएपनि तिर कर, छैन कोरोनाको कुनै डर, सिडियो साबको निर्देशको भएन भर”
अशोक संग्रौला - September 20, 2020 0
बीरगन्ज, ४ असोज - पर्सामा आगामी असोज १५ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय, संघसंस्था तथा व्यापार व्यवसाय गर्न दिने...
पर्साको छिपहरमाईमा दुई जना मृत फेला
पोखरिया, ४ असोज- पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा आज दुई जना मृत फेला परेका छन् । सो गाउँपालिकाको वडा नं. ४ बन्जारीमा आज बिहान एक जनाको शव...
फिल्मी करियरको पूवार्द्ध कति दुखदायी थियो भन्ने कुरा खुलाउँदै कंगना रनवतले एउटा किस्सा सुनाएकी छिन्, ‘सुरुवाती दिनमा मलाई एउटा फिल्ममा काम मिलेको थियो, जुन एडल्ट जस्तै थियो ।’ यस्तो खुलसा उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा गरेकी हुन् । कंगनाले सुनाएकी छिन्, ‘साइन गरेपछि फोटोशुटमा लगियो । त्यहाँ मलाई लगाउनका लागि एउटा पहिरन दिइयो, जो भित्र पुरै खुला थियो । त्यहाँको माहौल पनि कुनै ब्लु फिल्मको सुटिङ जस्तै थियो ।’
करियरका लागि संघर्ष गर्दा-गर्दै थाकेकी कंगना कसरी यौनजन्य फिल्ममा काम गर्न तम्सिइन् रु कथा मार्मिक छ । जतिसुकै प्रयास गरेपनि उनले कुनै फिल्म पाएकी थिइनन् । त्यही झोंकमा एउटा फिल्ममा साइन गरिन्, जुन फिल्म सि ग्रेडको फिल्म थियो । ब्लु फिल्मकी हिरोइन जस्तै आफुलाई पेश गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो तर उनी विवश थिइन् ।
अँग्रेजी बोल्न नजानेपछि
सुरुवाती दिनहरु सम्झदै कंगनाले भनेकी छिन्, ‘यस उद्योगको मान्छेहरु चाहन्छन् कि, मैले बोल्ने हक छैन । र, म कुनै अनावश्यक चिज हुँ । मलाई थाहा थियो कि, राम्ररी अँग्रेजी बोल्न आउँदैन । त्यही कारण मान्छेले मेरो मजाक उडायो ।’
अँग्रेजी भाषामा पोख्त नभएकै कारण फिल्मबाट रिजेक्ट भएको तितो अनुभव छ, उनीसँग ।
जब ग्याङस्टार मिल्यो
फिल्ममा शीर्ष भूमिका खोज्ने र हिरोको भन्दा बढी पारिश्रमिक लिने बलिउड अभिनेत्री कंगना रनवतको जीवन-कथा फिल्मी शैलीको छ । उनले करियरको पूर्वाद्धमा अनेक उतार-चढाव झेलिन् । त्यही बेला हो, उनले एडल्ट फिल्ममा काम गर्ने निर्णय लिएकी ।
तर सुखद संयोग मान्नुपर्छ, ठीक त्यही बेला उनलाई अनुराग बासुले निर्देशन गर्ने फिल्म ग्याङस्टारमा मौका मिल्यो । उनी तुरुन्तै ग्याङस्टारका लागि राजी भइन् र सि ग्रेडको फिल्म छाडिन् । उनले एडल्ट फिल्मका निर्देशकको नाम भने गोप्य राखेकी छिन् ।
उनले अभिनय गरेको पहिलो थ्रिलर फिल्म ग्याङस्टार, जो २००६ मा सार्वजनिक भयो, त्यसले उनलाई फिल्मफेयर बेस्ट फिमेल डेब्यु अवार्ड दिलायो । त्यसपछि उनले लम्हे, लाइफ इन अमेट्रो, वान्स अपन अ टाइम इन मुम्बई, फैशन, तनु वेड्स मनु जस्ता सुपरहिट फिल्ममा अभिनय गरिन् ।
कसरी बनिन् अभिनेत्री ?
कंगना आफ्नो करियरको बारेमा स्पष्ट थिइनन् । के बन्ने भन्ने कुनै टुंगो थिएन । त्यही क्रममा उनी एलिड मोडलिङ नामक मोडलिङ एजेन्सीको सम्पर्कमा आइन् । तर कंगनालाई रस भिजेन, मोडलिङमा । मोडलिङ भन्दा उनलाई अभिनय उचित लाग्यो । अन्ततः अस्मिता थिएटर ग्रुपमा भर्ना भइन्, अभिनय गर्ने मनोकांक्षाका साथ । नाटक खेल्न थालिन् । उनको अभिनय रुचाइयो । मुम्बईको एक स्कुलबाट नाटक अभियनको तालिम लिइन् । नाटकबाट उनी फिल्ममा प्रवेश गरेकी हुन्, ग्याङस्टारबाट ।
अनि बनिन् ‘क्विन’
कंगनाले उपमा पाएकी छिन्, बलिउड क्विन । खासगरी फिल्म क्विनबाट उनको करियरको दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ । त्यस फिल्मबाट उनले राष्ट्रिय सम्मानदेखि, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको अवार्डसम्म पाइन् । क्विन मात्र होइन, रिभोल्वर रानीमा गरेको सानदार प्रस्तुतीले समेत उसको ख्याती अग्लियो ।
बोल्ड र बिन्दास कंगना बलिउडका त्यस्ता अभिनेत्री हुन्, जो खुलस्त छिन् । कुनै कुरा नलुकाउने उनी त्यही प्रवृत्तिको कारण कहिले कहिं लफडामा पनि फस्छिन् । मैले अस्विकार गरेकी थिएँ, त्यही कारण प्रियंका चोपडालाई सबै अवार्ड मिल्यो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने उनी भारतिय समाजको कटु आलोचना गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।
कुनै गडफादर विना नै बलिउडमा आफुलाई टिकाउन र बिकाउन सफल उनी कहिल्यै बिहे नगर्ने भन्दै कसम खाएर पनि चर्चामा आएकी थिइन् । कहिले आफ्नो खराब अंग्रेजी सुधार्ने त कहिले कामकै बीचमा स्क्रिप्ट राइटिङ कोर्सका लागि न्युर्योक गएको कुराले पनि उनी गसिपको पात्र बनिन् । आखिर जे भएपनि उनको फिल्मी उपस्थिती भने निकै दर्बिलो छ ।
कंगना जतिबेला संघर्षको चरणमा थिइन्, त्यसबेला आदित्य पन्चोलीले उनलाई सहयोग गरेका थिए । तर, पछि कंगना र आदित्यबीच विवाद भयो । रक्सीको नसामा आदित्यले आफ्नो यौन लुट्न खोजेको आरोप लगाएकी थिइन् । कंगनाको कथित पूर्व प्रेमी शेखर सुमनको छोरो अध्ययन सुमनलाई छाडा गाली गर्ने, थप्पड हान्ने, ज्योतिषकहाँ जाने, कालो जादु गर्ने जस्ता आरोप लगाएका थिइन् ।
विन्दास कंगना, विद्रोही कंगना
कंगना बलिउडकी यस्ती अभिनेत्री हुन्, जसले हिरोले बराबर पारिश्रमिक डिमान्ड गर्छिन् । हिरो बराबर मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी पनि । कंगनाले फिल्म ‘रंगून’ का लागि आफ्ना अपोजिट शाहिद कपुरले भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएकी थिइन् । उनको पारिश्रमिक भारु १० करोड हाराहारीमा छ ।
कंगना नै यस्ती अभिनेत्री पनि हुन्, जसले सिंगो फिल्म बोक्न सक्छिन् । अर्थात उनकै बलमा पनि फिल्म चल्छ । रिवल्भर रानी, क्वीन, मणिकर्णिका त्यसैको उदाहरण हुन् ।
बलिउड अभिनेत्रीमा कंगनाको उचाई जुन रफ्तारमा बढ्यो, त्यो असन्तुलित पनि रह्यो । करियरको उत्कर्षमा उनी निकै विवादित बनिन् । विवादको उत्खनन् भने उनी आफैले गरिन् ।
अभिनेता हृतिकलाई गोप्य इमेल पठाउने कुरा उप्काएर उनले विवादको बिऊ रोपिन् । कंगना र हृतितकले एक–अर्कालाई सन् २०१६ मा कानूनी नोटिस पठाएका थिए । कंगनाको दावी के थियो भने उनीहरु दुबै सम्बन्धमा थिए र हृतिकले उनीसँग विवाह गर्ने वचन दिएका थिए । हृतिकले यो कुरालाई ठाडै अस्विकार गरिदिए । उनले दुबैले संगै काम मात्र गरेको बताएका थिए । हृतिकले त उक्त कुराका लागि कंगनाले आफूसँग सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने कुरा समेत बताएका थिए ।
कंगनाको भनाइ के थियो भने, सन् २०१६ र २०१७ का बीचको त्यो अवधि उनका लागि निकै कष्टकर थियो, जतिबेला उनले बेइज्जती सहनु पर्यो र मानसिक रुपले अस्थिर भएको आरोप सुन्न प¥यो ।
‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ’ भनेझै हृतिकको गोप्य इमेल कान्डले अरु थुप्रै बलिउड अभिनेतालाई ‘बिटुलो’ बनाइदियो । र, यो प्रकरणले उल्टै कंगनालाई नराम्ररी पछा-यो । उनी विवादै विवादको भूँमरीमा फँसिन् ।
कतिसम्म भनियो भने, बलिउडका इभेन्टहरुमा कंगनालाई निम्तो दिन छाडियो । त्यती मात्र होइन, उनले ब्वाइफ्रेन्डलाई मासिक स्रावको रगत समेत पिउन लगाइन् । भलै, यी हल्लाहरु अहिले मत्थर भइसकेका छन् ।
कंगनाले भाइ-भतिजावाददेखि राजनीतिक बुझाइको कमिको मुद्दामा सार्वजनिक रुपमै करण जौहर, रणबीर कपूर तथा आलिया भट्टसमेत बलिउडका थुप्रै दिग्गज व्यक्तित्वका विरुद्ध बोलिसकेकी छिन् ।
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरे लगत्तै कंगनाले दिएको कडा अभिव्यत्तिले बलिउडलाई तरंगित बनायो । सुशान्तले आत्महत्या गरेको नभई हत्या गरिएको भन्ने उनको स्पष्ट अडानले अहिलेसम्म त्यो मुद्दालाई साम्य हुन दिएको छैन ।
कंगना रनवतको जन्म २३ मार्च १९८६ मा हिमाचल प्रदेशको मन्दी जिल्लास्थित भाम्बला गाउँमा भएको हो, राजपूत परिवारमा । उनका माता आशा एक स्कुलका शिक्षिका थिइन् भने पिता अमरदीप व्यापारी थिए । भाम्बलाको प्राचिन घरमै उनको पालन पोषण भयो । उनको बालापन सामन्य थियो ।
बिद्रोह र जिद्दी
जब उनी ठूली भइन्, तब बिद्रोह र जिद्दी स्वभावकी थिइन् । उनको अनुसार यदि आफ्ना पिताजीले भाईका लागि प्लाष्टिक गन ल्याइदिन्थे र उनको लागि सानो गुडिया । तब उनी यसलाई स्विकार गर्दैनथी । भाई र आफुबीच भएको भेदभाव उनलाई मन पर्दैनथ्यो ।
स्कुले जीवनमा उनी चिकित्सक बन्न चाहन्थे, मातापिताले चाहे जस्तै । तर, १२ को केमेस्ट्रीको युनिट टेस्टमा फेल भएपछि उनको इच्छा बदलियो । यतिबेला कंगना १६ बर्षकी थिइन् । उनी दिल्ली आइन् । तर, दिल्ली पुगेपछि पनि के बन्ने भन्ने कुरामा उनले लक्ष्य बनाउन सकेकी थिइनन् । अचानक फेला परेको मोडलिग एजेन्सीबाट उनी ग्ल्यामर क्षेत्रमा प्रवेश गरिन् ।
निरन्तरको प्रयासले उनी बलिउडमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्षम भइन् । कंगनाको मातापिता वा सन्तान फिल्ममा छैनन् । उनी आफ्नी बहिनी रंगोली रनवतसँग मुम्बाईमा बस्छिन् । बहिनी रंगोलीमाथि २००६ मा एसिड अट्याक्ट भएको थियो । कंगना वर्षमा एक पटक आफ्नो जन्मथलो पुग्छिन् ।
कंगना रनवतको लभ अफेयरको सूची धेरै लामो छ । बलिउडमा पाइला राख्दै गर्दा उनको नाम आदित्य पंचोलीसँग जोडियो । आदित्यले कंगनाको लागि एउटा घर समेत खरिद गरेका थिए । तर, पछि उनीहरुबीच दुरी बढ्यो ।
त्यसपछि कंगना अभिनेता शेखर सुमनको छोरा अध्ययन सुमनसँग नजिकिइन् । तर, उनीहरुको सम्बन्धमा पनि पूर्ण विराम लाग्यो ।
अभिनेता अजय देवगनसँग समेत कंगनाको नाम जोडिएको छ । उनीहरुले वान्स अपन अ टाइम इन मुम्बईमा साथै काम गरेका थिए । कंगनाले एक अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘बिवाहितसँग सम्बन्ध गाँस्नु मेरो लागि भुल थियो ।’
त्यसपछि उनको नाम जोडियो, हृतिक रोशनसँग । उनीहरु क्रिस-३ मा एकसाथ काम गरेकी थिइन् । यसका साथै कंगनाको नाम ब्रिटिश अभिनेता निकोलस ल्यफरटीसँग पनि जोडियो ।
Previous articleसुनको मूल्य बढ्यो, तोलामा कति पुग्यो ?
Next articleचितवनमा कोरोना सङ्क्रमित वृद्धाको मृत्यु
भारतमा कोरोना संक्रमितको तिव्र वृद्धिबीच ताजमहल खुल्यो
नेपाल पोष्ट डेली - September 21, 2020 0
आग्रा । भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढे पनि उत्तर प्रदेशको आग्रास्थित ताजमहल र केही विद्यालयहरु स्थानीय प्रशासनले खुला गरेको छ। भारतमा कोभिड–१९ बाट संक्रमितको...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सातै प्रदेशका कारागारको अनुगमन गर्दै
Nepal Post Daily - September 21, 2020 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको असोज...
वामदेव गौतमको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदातमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले...
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न मुख्यमन्त्री राउतको माग
जनकपुर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारलाई निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न माग गर्दै पत्र पठाएका छन् । प्रदेश...
कार्तिक ७ गतेभित्र ‘क्लिन फिड’ लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आगामी कात्र्तिक ७ गतेसम्म विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सञ्चार...
लकडाउनकाे वास्तविक चित्रण सहित सार्वजनिक भयाे “जय हाे लकडाउन”
Nepal Post Daily - September 18, 2020 0
बीरगन्ज, २ असाेज - लकडाउनमा सर्वसाधारणहरूले भागेका समस्याहरूकाे वास्तविक चित्रण सहितकाे गीत जय हाे लकडाउन सार्वजनिक भएकाे छ । बीरगन्जका कलाकारहरुको एक टोलिले तयार पारेकाे...
गरिबको पिडा दर्शाउने “पेट बड़ी पापी”
Nepal Post Daily - September 17, 2020 0
नेपाल का युवाहरू द्वारा भोजपुरी गीत संगीत, कथा कहानी, कला संस्कृती मा निरन्तर कार्य गर्नुको साथै अश्लीलको बिरोध र श्लीलको प्रचार प्रसार गरिदै छ। बिगतका...
चाँडै सार्वजनिक हुँदै “जय हो लकडाउन”
Nepal Post Daily - September 15, 2020 0
बीरगन्ज, ३० भदाै । बीरगन्जका कलाकारहरुको एक टोलिले लकडाउन विशेष गीत तयार पारेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका...
सोनमले सान्त्वना देखाउँदै कंगनाको पक्षमा ट्वीट गरे पछि, कंगनाले उल्टै गरिदिइन् ट्रोल
Nepal Post Daily - September 11, 2020 0
एजेन्सी । फिल्म अभिनेत्री सोनम कपुरले कंगना रनौतको अफिसमा डोजर चलाएपछि सान्त्वना देखाउँदै कंगनाको पक्षमा ट्वीट गरेर दुःख जताइन् । यसमाथि कंगनाले सोनममाथि कटाक्ष...
तराई अस्पताल : जहाँ पैसा तिरुन्जेल रहन्छ बिरामीको श्वास, नत्र बुझ्नुपर्छ...
Banner May 26, 2020
विश्व September 21, 2020
देश September 21, 2020